Pet – SoShwe
3 days ago	Animals 0
May 22, 2022	Animals 0
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံရှိ Sammy ဟုအမည်ရသည့် အိမ်မွေးခွေးလေးသည် သူ့ရဲ့ ပိုင်ရှင်မိသားစုဝင်များကို မီးလောင်နေသည့် အိမ်အတွင်းမှ အချိန်မှီထွက်ပြေးနိုင်အောင် ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၆) ရက်နေ့ နံနက်အစောပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဆိုပါမီးလောင်မှု၌ Sammy သည် မီးစတင်လောင်ကျွမ်းသည်ကို မြင်တွေ့သည်နဲ့တစ်ပြိုင်နက် အဆက်မပြတ်ထိုးဟောင်ခဲ့ပြီး မိသားစုဝင် (၅) ယောက်လုံးကို အိပ်ရာမှလန့်နိုးစေခဲ့ပါတယ်။ Savannah မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က “Sammy ဟာ မိသားစုဝင် (၅) ယောက်လုံးကို မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ထဲကနေ အချိန်မှီကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီး မိသားစုဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး . . . ” ဆိုပြီး ၄င်းတို့ရဲ့ Facebook မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါစာသားနဲ့အတူ …
ကြောင်လေးတွေဟာ မိခင်နို့မဟုတ်တဲ့ နွားနို့ကိုသောက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
May 1, 2022	Animals 0
ကျွန်မတို့အိမ်မှာ မွေးကင်းစကြောင်သားလေးတွေရဲ့ ကြောင်မိခင်တွေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ ကြံရာမရနဲ့ သူတို့လေးတွေကို မိခင်နို့အစား နွားနို့ကို အစားထိုး တိုက်ကျွေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေကို အထူးကုသပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို Soshwe ရဲ့ ကြောင်ချစ်သူလေးတွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ ကြောင်လေးတွေရဲ့ အစာအိမ်ဟာ နွားနို့ကို တော်ရုံနဲ့ မချေဖျက်နိုင်ပါဘူး။ အမှန်တကယ်မှာတော့ ကြောင်လေးတွေဟာ နို့ထဲမှာပါတဲ့ သကြားနဲ့မတည့်တဲ့ Lactose Intolerance ကြောင့်ပဲဖြစ်ပြီး နွားနို့သောက်ခြင်းကြောင့် ဝမ်းပျက်တာတို့၊ အန်တာတို့၊ ခံတွင်းပျက်တာတို့၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာတို့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ Dr. Richter က “ကြောင်တွေဟာ မိခင်နို့ကို ၁၂ ပတ်ခန့်သာ သောက်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာ သွားလေးတွေစပေါက်လာပြီဆိုတာနဲ့ နို့သောက်တာရပ်ပြီး အစားကို စတင်စားသောက်ကြပါတော့တယ်။” …